Kalamiso (Pre-aclampsia) | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Waa Kuma Khabib Nurmagomedov – ninkii garaacay Conor McGregor?
BBC Somali, October 13, 2018
Maanso Ka Hadlaysaa Dhirta, Daaqa iyo Deegaanka (forestry, range and environment). By Amuun Cali Agoosto 23/2013
Abshiro Axmed Cabdi — July 18, 2019
Kalamisadu waa xaalad gaar ku ah Hooyoyinka uurka leh waxayna ku dhici kartaa marki uurku gaaro 30 isbuuc. Inkastoo ay hooyoyinka qaar ku dhici karto 24 isbuuc ee uurka laakiin way ku yartahay in markaan ku dhacdo.
Waxa ugu caan san ee lagu garto waa markey isku raacaan 3 dexdaan 2 kamid ah:
1. Hypertension (dhiiga oo kaco).
2. Proteinuria (Kaadi oo protiin lagu arko).
3. Oedema (hooyada oo bararto).
Waxa Sababo kalamisada:
Inta badan lama yaqaano sababta lakin waxaa keeni karo:
1. Hadii uurku mataamo yahay.
2. Hooyadu haday horey Dhiig kar u qabtay.
3. Hooyadu haday Sonkor ay qatay.
Sadexdaan waa kuwo ugu muhiimsan ee lagu tilmaamo in hooyada u keeni karaan pre-aclamsia.
Hypertension( dhiiga oo kaco):
Dhiig oo ku kaco hooyada waa mid ugu horeeyo ee sababi karo in hooyadu pre-aclampsia (kalamiso) ku dhacdo.
Socadka dhiiga ayaa isbadal ku imaadaa
waxuuna noqon karaa:
Systolic blood pressure (waa marki dhiig lakala gaarsiinayo Jirka ama la tuuryo dhiig si uu ugaaro jirka intiisa kale): marki uu dhiigu kaco waxa uu noqonayaa 140mmHg ama 160mmHg.
Diastolic blood pressure ( waa markii uu dhiigu kasoo aruurayo jirka) waxa uu noqonayaa 90mmHg ama 110mmHg.
Calaamada lagu arki karo hooyada Dhiigoo kaco
Jirka oo barar sida lugaha iyo wajiga ah.
Warwareer saa’id ah.
Madax xanuun badan.
Matag iyo lalabo.
Sidee looga hortagi karaa kalamisada
1.In hooyadu ku xirnaato ispitaal.
2. In la kantaroolo heereka dhiig.
3. In ay hooyadu cunto cuno isku dheeli tiran.
4. In hooyadu hesho nasasho ku fialan.
5. In hooyadu cabto biyo badan.
Tags: Kalamiso (Pre-aclampsia)
Next post Nin Marka uu Hurdaayo Sameeya Wax Uusan Sameyn Karin Isagoo Soo Jeeda
Previous post Shaqadee Dalkaaga U Qabataa?
Waa qoraa ka tirsan Tuke Somalism. Waxay aqoon u gaar ah u leedahay kuliyada kalkaaliso-nimada iyo umuliso-nimada. Qoraagga ayaa aad u jecel inay wax ka qorto cilmiga hooyada iyo dhalaanka, cilmiga nafaqada waxay tiri “Sababta aan u doortay Cilmiga Nafaqada ama cuntada ayaa ah dadka Sooomaaliyeed badan koodu ma ogo cuntada ay cunayaan faa’idadeeda iyo faa’ido daradeeda waan tan sababtay in dad badan inla jiifiyo isbitaaladda tusaalle dadka qabo Dhiig karka ama Sokorta. Waxaan rajaynayaa in aan soosaaro warbixino badan oo kahadlayo.”